Nyanzvi kugadzirwa kwemotokari jekiseni zvikamu zvine vimbiso yemhando |
Zvemagetsi jekiseni zvikamu
chigadzirwa zita:Zvemagetsi jekiseni zvikamu
maitiro:Jekiseni Kuumbwa / centrifugal Kudzingwa / CNC machine
Zvakanakira zvemagetsi epurasitiki zvikamu
(1) Kurema uremu
Imwe yemabhenefiti akatanhamara epolymer mota zvigadzirwa ndeyehuremu huremu uye yakasimba simba. Nekuti chiyero chepakati chepurasitiki chakasiyana chinongova 15-20% yesimbi yakajairwa, zvakare zvakareruka kupfuura huni hwakajairika. Iyi ficha inonyanya kubatsira kune yakakwira-kumagumo mota hombe, dzinogona kudzikisira huremu hwakawanda.
(2) Yakanaka kwazvo yakazara yemuviri nemakemikari zvivakwa
Imwe mukana wepolymer mota zvigadzirwa ndeyekuti vane akawanda mabasa uye anogona kushandiswa mune akakosha zviitiko. Plastiki ine yakanaka yekudzivirira zvinhu, yakanakisa ngura kuramba, kukwegura kuramba, yakanaka kupfeka kusagadzikana uye kukwesha kusagadzikana, yakanaka isapinda mvura kuita uye mehendi zvivakwa, yakanaka yekubatanidza zvivakwa, uye inogadziriswa mumhando dzakasiyana siyana Zvipenga zvemukati zvemukati uye zvekunze zvinoda kuita kwakawanda uye mashandiro.
(3) Yakanaka yekushongedza maitiro
Mukana wakakurumbira wepolymer mota zvigadzirwa ndiyo yakanakisa yekushongedza maitiro. Inogona kugadziriswa muzvigadzirwa zvine maumbirwo akaomarara uye mavara mazhinji panguva imwechete, uye dzimwe nguva zvinoda kudhindwa, kutorwa mifananidzo, kuvezwa, kuvezwa, uye kuvezwa. Iyo inogadziriswa kuita chaiyo chaiyo mufananidzo, pateni uye pateni, iyo inogona kutevedzera zvakasikwa huni, simbi, Iyo machira emhuka yeganda inogona zvakare kuvezwa, kupfurwa, sirivheri-yakafukidzwa, yakashongedzwa, nezvimwe.
(4) Kugadzirwa kwakanaka kwekuita
Nekuda kwepurasitiki yezvinhu zve polymer uye kuenderana kwakanaka nezvimwe zvinhu, zvakasiyana zvinhu zvezvinhu zvinogona kushandiswa, nerubatsiro rwemhando dzakasiyana dzemazuva ano dzekugadzira michina, kuburikidza ne extrusion, jekiseni kuumbwa, calendering, kuumbwa, kufuridza kuumbwa. zvishandiso zvine akasiyana maumbirwo, akasiyana zvivakwa, akasiyana mavara, uye akasiyana mashandisirwo nedzimwe nzira, senge yakananga extrusion mumapombi, profiles, mahwendefa, jekiseni muzvigadzirwa zvine akasiyana maumbirwo, calendering mumafirimu, nezvimwe. Inogona zvakare kugadzirwa kuita akasiyana mavara , interlayers, makomba, inoisa uye zvimwe zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa. Inogona zvakare kuve yechipiri inogadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa, sekushanduka, kubaya, kucheka, kupisa, uye kusungunuka kunopisa kwezvigadzirwa zvemuchina. , Cold saw, mukomboni, nezvimwe.Kupa Mazano: Ona vhoriyamu yekutenga
Pashure: Nyanzvi mukugadzirwa kwe crane nylon inotsvedza ine ruzivo rwakawanda
YeMagetsi Injection Yakaumbwa Zvikamu
Jekiseni richigadzirisa Automotive Zvikamu
Yakareba-hupenyu mc nylon inotsvedza yakakwira mhando uye d ...